မှန်ကန်သည့်လုပ်အားခနှင့် သူဌေးစစ်၊သူဌေးမှန်အတွက် စစ်မှန်သောအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း
အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့်အလုပ်မှ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ၊ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလဆု လာဘ်များမွေးထုတ်နိုင်သည့်အပြင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် နှစ်သက်စရာကောင်းသော တက်လမ်းတစ်ခုလည်းမွေးထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ယနေ့ ဆာရီနာရပ်ဆိုအလုပ်သင်အလုပ်များနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်ပါ။
သင်၏ဘ၀အဆင့်အတန်းမည်သို့ဖြစ်နေပါစေ အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့်အလုပ်သည် ကြီးကျယ်ခန့်နားသော သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ဆီသို့ ဦးတည်သွားနေသည့် လမ်းကလေးဖြစ်သည်။
သင်နှင့်လိုက်ဖက်သော အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့်အလုပ် ရှာပါ။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖော်ပြပြီး ယနေ့အခွင့်အရေးများအတွက် ကျွန်တော်/မတို့၏အလုပ်အကိုင်ဘုတ်အဖွဲ့သို့လာရောက်ပါ။
အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့်အလုပ် စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ အရခက်ထန်နိုင်ပါ သည်။ အစိုးရများ၏ဘောက်ဆုများ နှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများ အတွက် သင်၏အဆင့်ပြည့်မှီမှုအားတိုးချဲ့ရန် ဆာရီနာရပ်ဆိုမှ သင်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ဘောက်ဆုများ နှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ
လူအင်အားဖြည့်တင်းမှုမအစပြု၍ှ ပြီးဆုံးသည်အထိ သင်၏လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်ရေးနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော ပြဿနာများဖြေရှင်းရန် ဆာရီနာရပ်ဆိုမှ သင့်ကို ကူညီပေးပါမည်။
Get out and get jobactive
A large number of jobs don’t get advertised anywhere, however that doesn’t mean opportunities don’t exist.
Be jobactive in your job search and get out there and ask around for available work!
jobactive Sarina Russo Job Access how to get that job Lets get all Australians working Sarina Russo
Skill-up to becomeaTradie
Want to beaCarpenter, Electrician, Bricklayer or Plumber?
Then take advantage of the ‘Back to Work’ Pre Apprenticeship Initiative
Driving Apprenticeship Opportunities
We have hundreds of employers seeking apprentices and trainees every year through our Sarina Russo Apprenticeships Recruitment Service.
$7,500 for training costs
Up-skill to increase the productivity of your employers’ new recruits withaTraining for Employment Scholarship.
Trade apprentice registration discount - For Victorian Apprentices
Are you or somebody you knowatrade apprentice? You could be eligible fora50% discount on your 12-month car registration from the 1st of January 2016.